वर्षमा एक पटक घर बिदा जाँदा सैनिकलाई निःशुल्क यातायात, सकल दर्जा र हिताधिकारीलाई सुविधा नै सुविधा -3ghumti
वर्षमा एक पटक घर बिदा जाँदा...
वर्षमा एक पटक घर बिदा जाँदा सैनिकलाई निःशुल्क यातायात, सकल दर्जा र हिताधिकारीलाई सुविधा नै सुविधा
भाद्र २८, २०७८ सोमवार ०८:३६ बजे
काठमाडौँ । प्रभुराम शर्माले २०७८ भदौ २४ गतेबाट ४४ औं प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पूर्णचन्द्र थापा अवकाश भएपछि शर्माको काँधमा विधिवत् रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्व आएको हो । योसँगै व्राम्हण समुदायबाट प्रधानसेनापति हुने पहिलो रेकर्डसमेत शर्माले बनाएका छन् ।
नेपाली सेनाको कार्यभार सम्हालेपछि उनले २०७८ भदाैं २५ गते सकलदर्जाहरूलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै आफ्नो भिजन सार्वजनिक गरेका छन् । सेनामा प्रधानसेनापतिले कार्यभार सम्हालेपछि भिजन सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेको छ । शर्माको भिजनले बहालवाला र अवकाश सैनिक तथा तिनको परिवारमा भने उत्साह ल्याएको छ ।
शर्माले संविधानले सेनालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने कामलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकहतामा राखेका छन् । चार मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने शर्माको भनाइ छ ।
शर्माले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ४ र ५ मा अध्ययनरत हिताधिकारीका सन्नतीले वार्षिक २० हजार रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि प्रधानसेनापति छात्रवृत्ति र कल्याणकारी छात्रवृत्ति (स्वदेश) का लागि आफ्नै व्यवस्थापनमा अध्ययन गरिहेका हिताधिकारीहरूका लागि १ जना सन्ततीलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्न वार्षिक २० हजार सैनिक उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमै २५ शय्याको फिल्ड अस्पताल पनि खुल्दै छ । त्यसलाइ सेना दिवस २०७९ को अवसरमा सञ्चालन गर्ने सेनाकाे तयारी छ ।
वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा मुटुरोग निदान र उपचारका लागि क्याथ ल्याब स्थापना गर्ने, त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको सुविधा विस्तार गर्ने तथा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र बाहिर अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना पनि प्रधानसेनापति शर्माले अघि सारेका छन् ।
६० वर्ष उमेर पुगेका भूपू सैनिक तथा तिनको पारिवारलाई लक्ष्य गरेर पनि याेजना ल्याइएकाे छ । जसअन्तर्गत ज्येष्ठ भूपू सैनिक र तिनको परिवारको निवृत्तिभरण वार्षिक ५ हजारले वृद्धि भएको छ । यसअघि सेनाले यो सुविधाअन्तर्गत रु. सात हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
प्रधानसेनापति शर्माले घर निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा रु. २५ लाख रूपैयाँ आवासकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन् । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका सकलदर्जाका लागि यस्तो ऋण दिने योजना अघि सारिएको हो ।
सैनिकहरू वर्षमा एक पटक घर बिदा जाँदा निःशुल्क यातायात सु्विधा पनि दिइने भएको छ । सकल दर्जाका लागि परिवार आवास तथा ट्रान्जिट एक्कोमोडेसन विस्तार गर्ने अर्को योजना पनि सेनाको छ ।
सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ तालिमको शिक्षार्थी कोटा पनि पुनरावलोकन भएको छ । हाल सेनाको सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ तालिमको शिक्षार्थी कोटा संख्या ५७ रहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरेर ७७ पु¥याउन लागिएको हो । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ l
# सैनिक प्रमुख